लाखौं नेपालीको समस्या बन्दै मानसिक रोग – NamoBuddha Khabar
लाखौं नेपालीको समस्या बन्दै मानसिक रोग
बुधबार, आश्विन २४, २०७५ | १६:४५:४३ |
मानसिक स्वाथ्य दिवस नेपालमा पनि हरेक वर्ष अक्टोबर १० मा मनाईन्छ । मानसिक स्वास्थ्यको सवालमा हरेक वर्षनै चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ डिप्रेशन ।
डिप्रेशन एउटा मानसिक रोग हो । यो सामान्यतया उमेर ढाल्किएसंगै देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा भने युवाहरुमा बढि देखिएको छ । यद्यपी सबै उमेर समुहका मानिसहरुमा पनि देखिन सक्छ ।
यस्तो अबस्थामा मानिसलाई विशेषगरि मन दुखी हुने, उदास हुने,कसैको कुरा सुन्न मन नलाग्ने,एकान्तमा बस्न मन लाग्ने,आत्महत्या गर्न मन लाग्ने जस्ता लक्षणहरु देखिन्छ । धेरैमात्रामा थकाई लागिरहने, मनोरञ्जनात्मक कृयाकलापहरुमा पनि खुशी हुन नसकिने उदास हुने, निराश लाग्ने, निद्रा नलाग्ने,शरीरको तौल घट्दै जाने जस्ता लक्षणहरु पनि देखिन्छ ।
कहिलेकाहि मात्र देखिएमा त्यसलाइ डिप्रेशन भन्न मिल्दैन तर यस्तो समस्या धेरै समय सम्म रहेमा सोच्नुपर्दछ कि डिप्रेसनको सम्भावना हुन सक्छ भनेर ।
यो रोग विशेषगरि वंशाणुगत ,मनोसामाजिक , जीव रसायन जस्ता कारणले हुन्छ । कुनै अप्रत्याशित घटनाको सामाना गर्नुपरेमा जस्तै ः आफ्नो प्रियजनको मृत्यु, व्यवसायमा ठुलो क्षति व्यर्होनु, परिक्षामा असफल हुनु जस्ता घटनाले डिप्रेशन हुन सक्छ ।
साथै मधुमेह,छारेरोग, एचआइभी, मुटुसम्बन्धी रोग हाइपोथाइरोडिजम लागेकाहरुमा डिप्रेशनको सम्भावना बढि हुन्छ । उच्चरक्तचापका औषधी सेवन, पिल्स, स्टेरोइडको लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा पनि कसै कसैमा यस्तो समस्या देखा पर्न सक्छ ।
डिप्रेशनले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा असर पार्दछ । यस्ता बिरामीले बढि मात्रामा आत्महत्याको प्रयास गरेको विभिन्न श्रोतले जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्ता समस्या भोगिरहेका विरामी मध्ये ५०% डिप्रेशनको बिरामीले आत्महत्याको प्रयास गरेको र ५–१०%ले आत्महत्या नै गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेकोे छ ।
२२ लाख नेपाली युवामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या
डिप्रेशन जस्तै मेनिया,स्कीजोफ्रेनिया जस्ता मानसिक रोगहरु पनि नेपालमा देखिएको छ । समग्रमा २२ लाख नेपाली युवामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको अनुमान गरिएको छ । चिकित्सा मनोविद् मनोचिकित्सक तथा सी एम सी नेपालका प्राबिधिक निर्देशक डा. पशुपति महतले नेपालको कुल जनसङख्या मध्ये झण्डै १० प्रतिशतलाई कुनै न कुनै खालको मानसिक समस्या रहेको बताउनुहुन्छ ।
डा.महतले आफु वा आफ्नो परिवारमा कसैलाई मानसिक समस्या रहेमा नजिकैको स्वास्थ्य चौकी वा चिकित्सकलाई भेटेर उपचार गर्न सल्लाह दिनुहुन्छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन सस्थानका मनोचिकित्सा विभाग प्रमुख प्राध्यापक डा. सरोज प्रसाद ओझाले नेपालमा मानसिक रोग भन्ने वित्तिकै नकारात्मक रुपमा लिने चलन रहेको भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या सामान्य देखि जटिल सम्म हुने भएकाले यसको बेलैमा उपचार गरे पूर्ण रुपमा निको हुने भन्दै डा. ओझाले आफ्ना परिवारका कुनै सदस्यलाई थोरै मात्रै पनि मानसिक समस्या भए समयमा नै उपचार गराउन आग्रह गर्नुहुन्छ ।
तथ्याङक अनुसार नेपालमा प्रत्येक ५ जनामा १ जनालाई कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या रहेको छ । जसमध्ये महिलाहरुमा मात्रै ७० प्रतिशत मानसिक समस्या रहेको देखिएको छ । रोगीको कारण पत्ता लगाई उसलाई एक्लो हुन नदिने, परिवार साथीभाई संग राख्ने, उचित मनोपरामर्श दिने,डाक्टरको सल्लाहमा औषधी लिन सकिन्छ । यो रोगलाइ समयमानै उपचार गरेमा पुन पहिलेकै रुपमा फर्काउन सकिन्छ ।